Mijanona tsy handefa MIUI 10 betas i Xiaomi amin'ity volana ity | Androidsis
Eder Ferreño | | Rom, Android Version
Xiaomi dia niomana ny handefa ny MIUI 11 fotoana fohy, antenaina ho tonga amin'ny septambra araka ny vaovao vaovao. Mety ho marina izany, satria ny marika sinoa dia efa miomana hijanona tsy handefa ny beti MIUI 10. Famantarana mazava fa ny kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana azy dia efa manakaiky ny fanatrarana ny tsena.
MIUI 10 betas dia hifarana amin'ity volana aogositra ity, araka izay azo atao ny mahalala. Hatramin'ity volana ity dia tsy hisy intsony ny havoaka. Ka toa hita mazava fa mifantoka amin'ity fomba ity i Xiaomi amin'ny kinova manaraka, izay tokony hahatratra ny tsena vetivety.
Araka ny azo natao hahalala azy, ny kinova 9.8.29 an'ny MIUI 10 no fanontana farany izay hatomboka amin'ny programa beta. Xiaomi dia tsy handefa beta intsony amin'ity tranga ity. Hatramin'ny 31 Aogositra dia mifarana ity programa ity, mba hampisehoana ny zava-drehetra fa mifantoka sy miomana amin'ny fahatongavan'ny MIUI 11 ny orinasa.
Miasa ny orinasa fanovana maro ho an'ny sosona fanaingoana vaovao anao. Ny iray tamin'izy ireo dia ny fihenan'ny doka, izay zavatra niteraka resabe tato ho ato tao an-tsena. Ka ho fanovana izay horaisin'ny maro amin'ny tanana malalaka.
MIUI 10 dia efa nisolo tena dingana iray lehibe ho an'ny marika. Na dia namela antsika tamin'ny fanovana maro aza ireo volana ireo, toy ny rehefa nanambara izy ireo fa tsy namoaka ireo betas manerantany amin'ny sosona fanaingoana azy ireo. Ankehitriny dia ny beta ihany no avoaka any Shina, raha ny mpampiasa manerantany kosa dia tsy maintsy miandry ny kinova miorina.
Azo inoana fa hanaraka an'ity politika ity ihany izy ireo miaraka amin'ny kinova vaovao. Hafahafa raha MIUI 10 fotsiny no nataon'izy ireo, rehefa roa volana latsaka dia tonga ny kinova vaovao. Na izany na tsy izany, amin'ity herinandro ity dia ho fantatsika ny zava-drehetra, satria amin'ny volana septambra dia tokony ho fantatsika amin'ny fomba ofisialy ity kinova vaovao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Rom » Mijanona amin'ny famotsorana ny MIUI 10 betas i Xiaomi amin'ity volana ity
Google Pay izao dia mampiditra maody maizina amin'ny fampiharana
Ireo no efa voalaza namboarina momba ny Honor 8S Pro